By ဗစ်တိုးရီးယား Akpan TMLT စက်တင်ဘာလ 10, 2021 ခရီးသွား0မှတ်ချက်
- သင့်အနီးတွင် Romantic Getaways
နေ့စဉ်ဘ ၀ ရဲ့ဖိစီးမှုတွေနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်ပြီးသင်ဂရုစိုက်တဲ့လူတွေနဲ့အရည်အသွေးကောင်းတဲ့အချိန်ကိုဖြုန်းဖို့တခါတလေအရေးကြီးပါတယ်။ ခရီးတစ်ခုသွားဖို့ထက်ဒီပိုကောင်းအောင်ဘယ်လိုနည်းလမ်းရှိမလဲ။
ကမ်းခြေများမှတောင်များအထိ၊ အထင်ကရမြို့များမှမြို့ငယ်များ၊ ဝိုင်ထုတ်လုပ်ရာသို့ရေကန်များအထိအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌အချစ်ရေးအပန်းဖြေနေရာများစွာရှိသည်။
ဤအချစ်ရေးအပန်းဖြေခရီးများ ယူအက်စ်သည်ချစ်သောစုံတွဲများအတွက်စံပြဖြစ်သည်ပိတ်ရက်အပန်းဖြေခရီးဖြစ်ဖြစ်၊ ပိုရှည်တဲ့ခရီးဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။ ပိုမိုလေ့လာရန်ဆက်လက်ဖတ်ရှုပါ။
အောက်ပါတို့သည်သင့်အနီးရှိ Romantic Getaways အချို့ဖြစ်သည်။
၁။ Napa Valley, California
၎င်း၏လှပသောရှုခင်း၊ ရင်သပ်ရှုမောဖွယ် wineries များနှင့်ကမ္ဘာ့အဆင့်စားသောက်ဆိုင်များဖြင့် Napa ချိုင့် သေချာတာကတော့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာအချစ်ရဆုံးအပန်းဖြေခရီးတွေထဲကတစ်ခုပါ။
Napa Valley ကိုသွားလည်တဲ့အခါဒါတွေရှိတယ် romantic လုပ်စရာတွေအများကြီး သင်ရွေးချယ်မှုကြောင့်ပျက်စီးလိမ့်မည်။
နှစ်ယောက်စာညစာစားပွဲနှင့် Napa Valley ၏နေဝင်ချိန်မြင်ကွင်းကိုညနေခင်းတွင်ထည့်သွင်းထားသည်။
နိုင်ငံ၏အလှဆုံးပစ္စည်းများဖြစ်သော Napa Valley ၌စုံတွဲတစ်တွဲ၏ spa ကုသမှုကိုကြိုတင်မှာယူပါ။ Calistoga သည်ရွှံ့ဗတ်များကြောင့်လူသိများသော်လည်းသင်ပုံမှန် spa ကုသမှုလည်းရနိုင်သည်။
ဟင်းလျာမျိုးစုံနှင့်ဈေးနှုန်းအချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးသောစားသောက်ဆိုင်များတွင်သင်၏ညစဉ်နှစ် ဦး အတွက်အချစ်ညစာစားပွဲကိုကြိုတင်မှာယူပါ။ Bistro Jeanty သည်တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ပြင်သစ်လူမျိုးဖြစ်သည် အရသာရှိသောဟင်းလျာများရရှိနိုင်သောစားသောက်ဆိုင်.
သင်အရသာရှိသောခေါက်ဆွဲကိုရှာလျှင် Oenotri သို့သွားပါ၊ သို့မဟုတ်သင်အထူးအခမ်းအနားတစ်ခုကျင်းပလျှင်ကမ္ဘာကျော် French Laundry တွင်ကြိုတင်မှာယူပါ။
အပြင်ပန်းကိုသင်နှစ်သက်ပါကဧရိယာပန်းခြံများသို့လမ်းလျှောက်ပါ၊ သို့မဟုတ်အမှန်တကယ်ခက်ခဲသောစွန့်စားမှုအတွက်ဒေသတွင်းအမြင့်ဆုံးတောင်ဖြစ်သော Mount Saint Helena ၏ထိပ်သို့သွားပါ။
ရာသီဥတုကခွင့်ပြုလျှင်အနီးအနားရှိ Berryessa ရေကန်သို့ရွက်လွှင့်ရန် Kayak သို့လှေဖြင့် သွား၍ ဝှက်ထားသောပင်လယ်၌ရေကူးပါ။
2 ။ ဆီယက်တဲလ်ဝါရှင်တန်
ဤအရာသည်သင်အနီးရှိ Romantic Getaways တစ်ခုဖြစ်သည်။
ဒါကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့အကောင်းဆုံးရင်ခုန်စရာလည်ပတ်စရာနေရာတွေထဲကတစ်ခုပါ။ လူတွေဟာအမေရိကန်မှာအချစ်ရေးအပန်းဖြေခရီးတွေစဉ်းစားတဲ့အခါ Seattle ကိုသတိရတဲ့ပထမဆုံးနေရာမဟုတ်ဘူး။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ Emerald City သည်၎င်း၏ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်တောင်များနှင့်ကမ်းရိုးတန်းရှုခင်းများကြောင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ရင်ခုန်စရာနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
သင်တစ်ရက်သို့မဟုတ်သုံးရက်အတွက်ဆီယက်တဲလ်၌ဖြစ်စေ၊ သင်များစွာကိုတွေ့လိမ့်မည် မင်းရဲ့အိမ်ထောင်ဖက်နဲ့လုပ်ရမယ့်အချစ်ရေးကိစ္စတွေ.
Alki ကမ်းခြေကိုအေးအေးလူလူလမ်းလျှောက်ပါ၊ Great Wheel (စီးနင်းလိုက်ပါ၊ မင်းရဲ့သိသိသာသာအခြားသူဆီကနမ်းတာကိုခိုးယူပါ)၊ မြို့ရဲ့အချစ်ဆုံးနေရာတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Golden Gardens Park မှာဝိုင်ပုလင်းနဲ့ပျော်ပွဲစားထွက်ပါ။
တစ်နေ့တာမပြီးဆုံးမီတကယ့်ကိုရင်ခုန်စရာကောင်းသောနေဝင်ချိန်အတွက် Magnolia Buff's Discovery Park သို့သွားပါ။
3. Dallas, တက္ကဆက်
လူများစွာသည် Dallas သည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌အချစ်ရဆုံးမြို့များထဲမှတစ်ခုဖြစ်လာရန်အားလုံးသတိမပြုမိပါ။
မင်းက Dallas ကိုတစ်ရက်ဖြစ်ဖြစ်၊ ပိတ်ရက်ဖြစ်ဖြစ်သွားလည်တာ၊ ရင်ခုန်စရာလှုပ်ရှားမှုတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာသိပါ။
အမဲလိုက်နံရံဆေးရေးပန်းချီများမှဝိုင်သောက်ခြင်းနှင့် စုံတွဲတစ်တွဲရဲ့ spa ကုသမှုကိုရယူပါDallas ကစုံတွဲတိုင်းအတွက်တစ်ခုခုရှိတယ်။
DMA (သို့) Dallas ပြတိုက်သို့သွားခြင်းဖြင့်မင်းရဲ့ချိန်းတွေ့တဲ့ညကိုပိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းအောင်လုပ်ပါ။ DMA သည်၎င်း၏သောကြာနေ့တိုင်းနံနက်ခင်းအချိန်များတွင်တံခါးများဖွင့်ထားပေးသည်။ ပြတိုက်ရဲ့ဘားမှာသောက်ပြီးချိန်းတွေ့တဲ့စိတ်ကူးသစ်ကိုစမ်းကြည့်ပါ။
အစားအစာနဲ့ပတ်သက်လာရင်မြို့ရဲ့အကင်ဆိုင်တွေကိုမင်းမှားလို့မရဘူး။ ဥပမာအားဖြင့်ကြီးမားသော ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်အံ့သြဖွယ်အရသာများအတွက် Town Hearth သို့သွားပါ။ မင်းရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုတိုးတက်စေဖို့အရသာရှိတဲ့ဟင်းလျာကိုမင်းရဲ့လက်တွဲဖော်ကိုဝေမျှတာနဲ့တူတယ်။
မင်းဒီမြို့ကကမ်းလှမ်းတာကိုကြုံဖူးရင် Dallas ကနေအချစ်ခရီးလမ်းကိုဘာလို့မသွားတာလဲ။ တက္ကဆက်ပြည်နယ်သည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောမြို့များနှင့်နယ်ပယ်များပြည့်နှက်နေသည် bluebonnets ၏ ဤတွင်တက္ကဆက်လမ်းအားလပ်ရက်များအတွက်အကြံပြုချက်အချို့
4. Key ကိုအနောက်, ဖလော်ရီဒါ
Florida Keys ၏အလှဆုံး Key West သည်ကျူးဘားမှမိုင် ၉၀ ခန့်ကွာခြားပြီးထူးခြားသောအချစ်ရေးအထီးကျန်ကျွန်းဖြစ်ပြီးမိုင်ယာမီမှပိတ်ရက်ခရီးအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
သမုဒ္ဒရာ၏အမှန်တကယ်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရှုခင်းများနှင့်ရောနှောထားသောကျွန်း၏သာယာသောခံစားချက်ကို Key West သည်အခြားမည်သည့်အရာနှင့်မျှမတူအောင်ခံစားစေသည်။
Key West သို့သွားသောခရီးသည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည်။ ၎င်းကျွန်းသည်အမေရိက၏အလွန်လှပသောခရီးများထဲမှဒဏ္legendaryာရီ“ Overseas Highway” ဖြင့်ပြည်မကြီးနှင့်ဆက်သွယ်ထားသည်။
ကျွန်းပေါ်ရှိ Romantic လုပ်ဆောင်ချက်များတွင် Smathers Beach တွင်နေလောင်ခြင်း၊ Key West Butterfly and Nature Conservatory သို့သွားခြင်း၊ လင်းပိုင်များနှင့် snorkeling လုပ်ခြင်းနှင့် Dry Tortugas အမျိုးသားဥယျာဉ်သို့ဖယ်ရီစီးခြင်းတို့ပါ ၀ င်သည်။
ဒီကျွန်းဟာတိုင်းပြည်ရဲ့ထိပ်တန်း snorkeling နေရာတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပြီးပင်လယ်ပြာကပင်လယ်ကမင်းကိုပရဒိသုလိုခံစားရစေတယ်။
Santiago's Bodega ရှိ Spanish tapas နှင့်ဆုရ 'Better than Sx' အချိုပွဲ cafe တွင်အချိုပွဲသည်ညစာအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုများဖြစ်သည်။ ဤနေရာနှစ်ခုစလုံးတွင်အမှောင်နှင့်နီးစပ်သောအလင်းရောင်များရှိသည်၊ ၎င်းသည်၎င်းတို့အားအချစ်ရေးနေ့အတွက်သင့်တော်သည်။
အခမဲ့ Sacramento တွင်လုပ်စရာများ
ဝါရှင်တန်ဒီစီသည်ငါတို့နိုင်ငံ၏သမိုင်းကြောင်းတွင်တည်ရှိနေသောမြို့ဖြစ်ပြီးပိတ်ရက် (သို့) ရက်သတ္တပတ်တပတ်လောက်သွားရန်နေရာကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
DC တွင်သင်လုပ်နိုင်သောအချစ်ဆုံးအရာတစ်ခုမှာ Georgetown ၌သင်၏အထူးသူတစ်ယောက်နှင့်တစ်ရက်စျေး ၀ ယ်ခြင်းဖြစ်သည်။
ထို့နောက် Barcelona Wine Bar (သို့) Filomena Ristorante တွင်ညစာစားပြီးနောက် Kennedy စင်တာ၌ပြပွဲတစ်ခုကိုသွားကြည့်ပါ။
သူတို့ရဲ့အားလပ်ရက်တွေမှာမြို့ရဲ့အထင်ကရနေရာတွေကိုရှုစားရင်း National Mall ပေါ်မှာပျော်ပွဲစားနေ့လည်စာကိုဝိုင်ပုလင်းနဲ့ဝိုင်တစ်ပုလင်းနဲ့ဒေသခံတွေနှစ်သက်ကြတယ်။
နေ့လည်စာသုံးဆောင်ပြီးနောက်လူများစွာသည် Founding Farmers (သို့) Zaytinya ကဲ့သို့အစားအစာများကိုမစားခင်ပြတိုက် (နှစ်ခု) သို့ပြတိုက်နှစ်ခုသို့သွားကြသည်။
ချယ်ရီပန်းပွဲတော်သည်မဖြစ်မနေကြည့်သင့်သည်။ ချယ်ရီပန်းများပွင့်သောအခါ DC ရှိဒီရေကန်သည်ပန်းရောင်နှင့်အဖြူရောင်သို့ပြောင်းသွားပြီးပန်းများကိုကြည့်ရင်းမြို့၏အထိမ်းအမှတ်များစွာကိုသင်မြင်နိုင်သည်။
တစ်နေ့တာကိုစျေးဝယ်ခြင်း (သို့) ညစာ (သို့မဟုတ်နှစ်ခုလုံး) အတွက် DC's City Center သို့ခရီးတစ်ခုပြီးအောင်လုပ်ပါ။
၆။ Saint Augustine, Florida
အတိတ်ကလမ်းများ ဗိသုကာလက်ရာတွေကအံ့မခန်းပါပဲ။ ကမ်းခြေတွေကအံ့မခန်းပါပဲ။ Saint Florida, Saint Augustine သည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌အချစ်အပန်းဖြေခရီးများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်မှာသေချာသည်။
အမေရိက၏ရှေးအကျဆုံးမြို့ဖြစ်သော Saint Augustine သည်သမိုင်းဝင်ဆွဲဆောင်မှုများနှင့်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောမြို့များနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်။
ထို့ပြင် Saint Augustine သည်မိသားစုပိုင်စားသောက်ဆိုင်များတွင်ညစာစားခြင်းမှ၎င်း၏ချစ်စဖွယ်လမ်းများပေါ်တွင်လက်များဖြင့်လျှောက်လည်ခြင်းမှအရည်အသွေးကောင်းမွန်သောအချိန်များကိုအတူတကွဖြတ်သန်းရန်အကောင်းဆုံးစံပြနေရာဖြစ်သည်။
တစ်နေ့တာအတွင်း Castillo San Marco ကဲ့သို့သမိုင်းဝင်နေရာများစွာကိုလည်ပတ်ပါ။ ထို့နောက်ကမ်းခြေသို့မဟုတ်အိမ်နီးချင်းပြည်နယ်ပန်းခြံများထဲမှတစ်ခုကိုသွားပါ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းတစ္ဆေခရီးမသွားဘဲမြို့ကိုမထားခဲ့ပါနဲ့။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ရှေးအကျဆုံးမြို့ဖြစ်သော Saint Augustine သည်သရဲခြောက်သောနေရာများစွာရှိသည်။
သင်စိတ်ဝင်စားသည့်မည်သည့်အရာမဆို၊ Saint Augustine သည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ထိပ်တန်းစိတ်ကူးယဉ်ခရီးများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
၃။ ဆန်ဖရန်စစ္စကို၊ ကယ်လီဖိုးနီးယား
အဆိုပါကျော်ကြားသော Golden Gate တံတားရောင်စုံဝိတိုရိယအိမ်များ၊ ကေဘယ်ကားများနှင့်ယဉ်ကျေးမှုမျိုးစုံသည်ဤစည်ကားသောမြို့ကြီးတစ်မြို့၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဤ ၇ မိုင်စတုရန်းမိုင်မြို့သည်အခမဲ့ဘတ်ဂျက်မှပြည့်စုံသောဇိမ်ခံကားအထိဘတ်ဂျက်ရွေးချယ်မှုများစွာနှင့်လိုက်ဖက်သောအချစ်အတွေ့အကြုံမျိုးစုံကိုပေးသည်။
စိမ်ပြေနပြေပျော်ပွဲစားကစိတ်ကူးယဉ်နေ့လည်ခင်းတစ်ခုလို့စိတ်ကူးရင် Golden Gate ပန်းခြံကိုသွားလည်ပြီးဒီစိမ်းလန်းသောအိုအေစစ်မှာစိမ်နိုင်ပါတယ်။ အေးအေးဆေးဆေးအနားယူရန်ပန်းခြံ၌သင် Stow Lake ၌စက်ဘီးနင်းခြင်းကိုစဉ်းစားပါ။
Foodies များသည် Ferry Building သို့အလည်အပတ်သွားသင့်သည် အစားအစာမျိုးစုံရောင်းချသူလက်မှုစတိုးဆိုင်များ၊ ကဏန်းများနှင့် ပျော်ရွှင်စရာနှင့်ရင်ခုန်စရာညနေခင်းအတွက်ရှန်ပိန်.
သင်ဟာရင်ခုန်စရာကောင်းတဲ့ညနေခင်းကိုခံစားချင်တယ်ဆိုရင်စကားမပြောဘဲနေစေမယ့်စျေးကြီးတဲ့မြည်းစမ်းဖို့အတွက် Saison (သို့) Quince ကိုလာခဲ့ပါ။
စိတ်ကူးယဉ်ဆန်သောသီတင်းကျွတ်ပိတ်ရက်ကိုကျော်လွန်ရန် Twin Peaks သို့မောင်းပြီးမင်းအောက်ကမြို့မီးရောင်လေးတွေမှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်ကြည့်ရင်းမင်းအိမ်ထောင်ဖက်နဲ့နီးနီးကပ်ကပ်နေပါ။
၈။ Beaufort, South Carolina
တောင်ကယ်ရိုလိုင်းနား၊ Beaufort၊ သင်ချစ်သောသူအားဝေမျှရန်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောအရာများနှင့်ပြည့်လျှံနေသောချစ်စရာကမ်းခြေမြို့လေးကိုနောက်ထပ်မကြည့်ပါနှင့်။
နေရာတိုင်းတွင်တွေ့ရသောဖော်ရွေပျူငှာမှု၊ ဧည့်ဝတ်ပြုမှု၊ သမိုင်းကြောင်းနှင့်လှပမှုတို့ကြောင့်သမိုင်းဝင် Beaufort သည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌အချစ်ရဆုံးမြို့များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
၃၂၄ ဧကကျယ်ဝန်းသည့်ရှေးဟောင်းခရိုင်သည်စပိန်ရေညှိများဖြင့်ဖုံးလွှမ်းထားသောသမိုင်းဝင်စံအိမ်ကြီးများ၊ စိတ်ကူးယဉ်ဆန်သောတည်းခိုခန်းများနှင့်ပြည့်နှက်နေသောကြောင့်မြို့ကိုဆွဲဆောင်မှုရှိစေသည်။
Henry C. Chambers Waterfront Park ၏ရေစပ်အနားတွင်လက်ချင်းတွဲပြီးလမ်းလျှောက်ပါ၊ ထို့နောက်လှေများလှေဆိပ်သို့ ၀ င်ရန်လှေများကိုကြည့်ရန်ရေမျက်နှာလွှဲ၌ခဏအနားယူပါ။
စူးစမ်းပါ စျေးဆိုင်များ၊ ရှေးဟောင်းဆိုင်များနှင့်အနုပညာပြခန်းများ အိမ်နီးချင်းအဓိကလမ်းတစ်လျှောက်
Hunting Island State Park ၏အံ့မခန်းမြင်ကွင်းများအတွက်မီးပြတိုက်၏ထူးခြားသောလိမ်လှေခါးကိုတက်ပါ။ ထို့နောက်နေဝင်ရီတရောတွင်သဲသောင်ပြင်၌အသိုက်ပြုလုပ်ထားသောလိပ်များကိုရှာဖွေရန်သီးခြားဖြစ်သောကမ်းခြေတစ်လျှောက်လမ်းလျှောက်ပါ။
နောက်ဆုံးတွင် Saltus River Grill ၏သီးသန့်ကမ်းနားစားသောက်ဆိုင်သို့အံ့မခန်းနေဝင်ချိန်ခရီးသို့သင့်ကိုခေါ်ဆောင်ရန်လှေတစ်စင်းငှားပါ။
စုံတွဲများသည် Lowcountry နှင့် South Carolina သို့ရက်ပေါင်းများစွာခရီး၏အချစ်ဇာတ်လမ်းကိုခံစားနိုင်သည်။
9 ။ မိုင်ယာမီဖလော်ရီဒါ
မိုင်ယာမီ၏သဘာဝသဘာဝသည်အချစ်ရေးအပန်းဖြေရန်စံပြနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ South Beach ၏ကျယ်ပြန့်သောအဖြူရောင်ကမ်းခြေများနှင့်ကြည်လင်ကြည်လင်သောရေများသည်အပန်းဖြေရန်အလွန်ကောင်းသည်။
South Pointe Park Pier တစ်လျှောက်အချစ်ရေးအပန်းဖြေလမ်းလျှောက်ခြင်းသည်ကမ်းခြေနေ့ကိုအဆုံးသတ်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ စုံတွဲများသည်မိုင်ယာမီ၏ရေလမ်းကြောင်းများ၊ အထူးသဖြင့် Biscayne Bay တွင်နေဝင်ချိန်အပျော်စီးအပျော်စီးသင်္ဘောကိုနှစ်သက်သည်။
ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုထည့်ရန်လူများစွာသည်စားသောက်မှုသို့မဟုတ်ဂီတဖျော်ဖြေမှုကိုထည့်သွင်းသည်။ သမုဒ္ဒရာနားကညစာစားပွဲကမင်းရဲ့အရာမဟုတ်ရင်မိုင်ယာမီမှာအခြားရင်ခုန်စရာစားသောက်စရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။
Little Havana သည် foodie စုံတွဲများအတွက်အကြီးမြတ်ဆုံးခရိုင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤတက်ကြွသောရပ်ကွက်၏အဓိကသည် Calle Ocho၊ SW 8th Street၊ ဖြစ်သည် ဒေသခံကျူးဘားအစားအစာအချို့ကိုဝေမျှရန်သင့်တော်သည်.
မိုင်ယာမီသည်၎င်း၏အနုပညာအတွက်အသိအမှတ်ပြုခံရပြီး Vizcaya ပြတိုက်သည်အနုပညာကိုရှာဖွေရန်မြို့၏အချစ်ဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဒါ့အပြင် ဖလော်ရီဒါအနောက်တောင်ပိုင်းတွင်တည်ရှိသော Naplesဖြူဖွေးသောသဲများနှင့်စိမ်းပြာရောင်ပင်လယ်များအပြင်သာယာအေးချမ်းသောရင်ခုန်စရာအငွေ့အသက်များနှင့်လှပသောကမ်းခြေများဖြင့်ဝန်းရံထားသည်။
နေပယ်မြို့တွင်လုပ်ရမည့်အပျော်ဆုံးအရာသည်ကမ်းခြေသို့သွားခြင်းဖြစ်သည်၊ နေထွက်ချိန်၊ နေဝင်ချိန်သို့နေ့လည်ခင်းလမ်းလျှောက်ရန်ဖြစ်စေစုံတွဲများစိတ်ပျက်မည်မဟုတ်ပါ။
စွန့်စားမှုသဘောရှိသောစုံတွဲများသည်နေဝင်ချိန်တွင်လှေပြိုင်ပွဲသို့ရွက်လွှင့်နိုင်သည်။ လင်းပိုင်တွေကိုသတိထားစောင့်ကြည့်ဖို့သတိရပါ။ နေပယ်ဆိပ်ခံတံတားသည်နေဝင်ချိန်ကိုကြည့်ရန်နောက်ထပ်ရင်ခုန်စရာနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
Everglades အမျိုးသားဥယျာဉ်သည်စုံတွဲများအတွက်မဖြစ်မနေကြည့်သင့်သောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ စုံတွဲများအတွက်ပေါများသောတိရိစ္ဆာန်များ၊ ကမ်းရိုးတန်းဒီရေတောများနှင့်အခြားရှုခင်းများကိုစူးစမ်းလေ့လာရန်ခရီးများရရှိနိုင်ပါသည်။
လှပသောသဘာဝရှုခင်းအပြင် Naples တွင်နာမည်ကျော်ကျောက်မျက်ရတနာတစ်ခုရှိသည်။
၎င်းတွင် Beverly Hills ခံစားချက်ရှိပြီးညနေခင်းကိုပျော်စရာနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင် Naples သည်ခြောက်သွေ့။ သာယာသောရာသီဥတုရှိသောကြောင့်အမေရိကန်နိုင်ငံ၌အလွန်ကောင်းသောဆောင်းရာသီအားလပ်ရက်နေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ကောင်းမွန်သောစားသောက်ဆိုင်၊ ပြဇာတ်ရုံ၊ စျေး ၀ ယ် ကော်ဖီဆိုင်များအနုပညာပြခန်းများနှင့်အခြားဆွဲဆောင်မှုများအားလုံးကိုဤဒေသတွင်တွေ့နိုင်သည်။
စားသောက်ဆိုင်များစွာသည်ပျော်ရွှင်သောအချိန်များကိုပေးသည်၊ ထို့ကြောင့်အချိုရည်နှင့်အစာစားချင်သူတစ် ဦး သို့သွားပြီးနောက်ညစာအတွက်အခြားတစ်ခုသို့သွားခြင်းသည်ပျော်စရာကောင်းသည်။
ပဉ္စမရိပ်သာအနီးရှိ Sails စားသောက်ဆိုင်သည် Naples ၏အကြီးမြတ်ဆုံးစားသောက်ဆိုင်များအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကောင်းမွန်သောအိမ်လုပ်ခေါက်ဆွဲ၊ အကင်များနှင့်အချိုပွဲများကြွယ်ဝပြီး၎င်း၏ပင်လယ်စာများကြောင့်နာမည်ကြီးသည်။
၁၁။ The Berkshires, Massachusetts
၎င်းသည်သုံးနာရီခန့်ကွာသော Boston နှင့် New York မြို့တို့မှနာမည်ကြီးအချစ်ရေးခရီးများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဆောင်း ဦး ၌ Berkshires သည်ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းသစ်ရွက်များနှင့်အတူရင်သပ်ရှုမောဖွယ်အလွန်လှပသည်။
စွမ်းရည်အမျိုးမျိုးအတွက်ခြေလျင်ခရီးများကိုရရှိနိုင်ပြီး Appalachian Trail ၏အပိုင်းများသည်တောင်ကို ဖြတ်၍ ဖြတ်သွားနိုင်သည်။ တောင်တက်တာကမင်းရဲ့အရာမဟုတ်ရင်တောင်အပေါ်ဆုံးအထိလှပတဲ့ drive ကိုယူနိုင်ပါတယ်။
ကြည်လင်သောနေ့တွင်မြင်ကွင်းကျယ်မြင်ကွင်းများသည်ထိပ်ဆုံးမှ Vermont နှင့် New Hampshire အထိဝေးသည်။ ကြည်လင်တဲ့ညမှာ stargaze လုပ်နိုင်လိမ့်မယ်။
Stockbridge၊ Lee နှင့် Lenox ကဲ့သို့ Berkshires ၏မြို့ငယ်များတစ်ဝိုက်ကိုလေ့လာပါ။ ရှေးဟောင်းဆိုင်များ၊ ဒေသထွက်ကုန်များနှင့်အခြေခံအထွေထွေစတိုးဆိုင်များနှင့်လွတ်လပ်သောအနုပညာပြခန်းများကိုဤနေရာတွင်တွေ့နိုင်သည်။
Stockbridge ရှိ Red Lion Inn ကိုကိုက်စားရန်၊ ခမ်းနားထည်ဝါသောဝိတိုရိယခေတ်၊ သို့မဟုတ်သူတို့၏အိမ်ဝင်း၏လတ်ဆတ်သောလေကို ၀ င်စားရန်ကိုက်စားရန်အတွက်စားပါ။
ကျေးလက်ဒေသသို့ခရီးတစ်ခုသည်ဒေသခံလယ်ယာတစ်ခုတွင်မရပ်မနားဘဲပြီးဆုံးသည်။ သစ်သီးဝလံနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များရွေးချယ်ခြင်း အခြားနာမည်ကြီးလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ရာသီပေါ် မူတည်၍ ပန်းသီး၊ ပြောင်း၊ ဘယ်ရီသီးနှင့်ရွှေဖရုံသီးတို့ကိုသင်တွေ့ရှိနိုင်သည်။ မင်းရဲ့ပန်းစည်းတွေကိုတချို့ခြံတွေမှာတောင်ဖြတ်နိုင်တယ်။
12. Charleston, တောင်ကယ်ရိုလိုင်းနား
ငါတို့ဆက်မသွားခင်ဒါကိုသိဖို့ကအရေးကြီးတယ်။ Charleston သည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌အချစ်အားလပ်ရက်များအတွက်အသင့်တော်ဆုံးမြို့များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်၊ အထူးသဖြင့်ဆောင်း ဦး ရာသီတွင်၊ ရာသီဥတုသည်အနည်းငယ်၊ လေကအနည်းငယ်အေး။ နေ့ရက်တိုသည်။
Charleston ၏ကျော်ကြားသောဓာတ်ငွေ့လမ်းကြောင်းများနှင့်လမ်းကြားများတစ်လျှောက်အချစ်ရေးလမ်းလျှောက်ရန်ပြီးပြည့်စုံသောအခြေအနေများ ထို့အပြင်ဤသက်တောင့်သက်သာရှိသောလေထုထဲသို့သင်မီးခိုးခေါင်းတိုင်မှထွက်လာသောမီးခိုးနံ့ကိုလည်းသင်ရလိမ့်မည်။
Charleston ၏ဆောင်း ဦး ရာသီသည် ၁၉၇၀ နှင့် ၁၉၆၀ ခုနှစ်များတွင်ပုံမှန်အားဖြင့်ရှိသော်လည်း Charleston ရှိလူများသည်အနည်းငယ်အေးပြီးညအချိန်တွင်ပိတ်မိနေတတ်သည်။
အေးမြသောရာသီဥတုသည်ကမ်းခြေအတွက်မကောင်းနိုင်သော်လည်းတောင်တက်ရန်အလွန်အဆင်ပြေသည်။ စိတ် ၀ င်စားစရာရွေးချယ်စရာများတွင်သမိုင်းဝင် Charleston ခရီးစဉ်များနှင့်အရက်ဆိုင်များပါ ၀ င်သည်။ ကောလဟာလကဒါပဲ
Charleston သည်တစ္ဆေများကိုတောင့်တသောသူများအတွက်ပြီးပြည့်စုံသည်၊ ထို့ကြောင့်သင်ပင်သရဲခြောက်သည့်ဘားသို့တက်ပြီးအမှောင်ထဲမှမြို့ဟောင်းအကျဉ်းကိုစူးစမ်းနိုင်သည်။
Charleston တွင်ကြီးကျယ်သောထမင်းစားခန်းရှိသည်၊ ၎င်းကိုလက်လွတ်ခံခြင်းသည်ရှက်စရာကောင်းလိမ့်မည်။ အဆင့်မြင့်ဟင်းလျာများတွင် Husk နှင့် Fig အပြင် Magnolia's သို့မဟုတ် Poogan's Porch ကဲ့သို့ရိုးရာ brunch staples များပါဝင်သည်။
၁၃။ Finger Lakes Region, New York
ဒါကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့အကောင်းဆုံးရင်ခုန်စရာလည်ပတ်စရာနေရာတွေထဲကတစ်ခုပါ။ စုံတွဲများသည်အမေရိကန်သို့စိတ်ကူးယဉ်ခရီးတစ်ခုကိုရှာဖွေနေသည် New York ပြည်နယ်အထက်ပိုင်းရှိ Finger Lakes District ကိုသူတို့၏ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများစာရင်းထဲထည့်သင့်သည်။
Watkins Glen သည် Seneca Lake ၏ကမ်းခြေပေါ်တွင်တည်ရှိပြီးအချစ်ရေးကိုရှာဖွေနေသောစုံတွဲများအတွက်စံပြနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
၁၉၄၀ ခုနှစ်များနှင့် ၁၉၅၀ ခုနှစ်များတွင်အချစ်ဇာတ်ကားများခေတ်ကိုပြန်လည်ဖန်တီးမည့် Seneca Lake တွင်မှော် True Love ရွက်လွှင့်ခရီးကိုကြိုတင်မှာယူပါ။
အဖွဲ့သားများကဧည့်သည်များအားဖျော်ဖြေသည် ဒေသခံဒိန်ခဲပန်းကန်နှင့်ဒေသထွက်ဝိုင်တစ်ခွက်မရ။ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်နှစ်သိမ့်နိုင်အောင်စောင်တွေရှိတယ်။
ဝိုင်ချစ်သူများသည် Finger Lakes Wine Trail ကိုစူးစမ်းချင်လိမ့်မည်။ ပြည်တွင်းဝိုင်ပေါင်း ၄,၄၄၄ သည် Riesling၊ sparkling wine နှင့်ရေခဲစပျစ်တို့ကိုအထူးပြုထုတ်လုပ်သည်။
အမျိုးမျိုးလိုချင်သူတွေ၊ ဘီယာချက်တာ၊ နှစ်ခု၊ ဒါမှမဟုတ်ဘီယာအနည်းငယ်တောင်ထည့်နိုင်တယ်; ရွေးချယ်နိုင်သောဒေသတွင်ဘီယာ၊ ဘီယာချက် ၁၀၀ ကျော်ရှိသည်။
ဒါမှမဟုတ် Watkins Glen State Park ရဲ့လမ်းတွေကိုအတူတကွလမ်းလျှောက်ရင်းအေးချမ်းတဲ့အချိန်ကိုသုံးပါ။ ရေတံခွန် ၁၉ ခုနှင့်အတူ၊ အခြားတစ်ခုထက်ပိုလှပသည်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
ဤလှပသောချောက်ကို ဖြတ်၍ လမ်းလျှောက်ရန်နှစ်နာရီခန့်ကြာပြီးရှုခင်းကိုကြည်နူးစွာနှင့်ဓာတ်ပုံရိုက်ပါ။ တစ်နေ့တာ၏အဆုံးတွင်လှပသော Seneca Lake Pier သို့လမ်းလျှောက်ပါ။
ခုံတန်းရှည်ပေါ်တွင်လက်ချင်းချိတ်လျက်ရွက်လွှင့်လှေသည်သင်္ဘောကျင်းသို့ပြန်လာသည်ကိုကြည့်သည်။ ဤသည် Finger Lakes ဒေသရှိအချစ်ခရီးကိုအဆုံးသတ်ရန်ပြီးပြည့်စုံသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
၁၄။ အိုဟူး၊ ဟာဝိုင်အီ
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌အချစ်အားလပ်ရက်အတွက်အကောင်းဆုံးနေရာများထဲမှတစ်ခုမှာ Oahu ဖြစ်သည်။ ဟာဝိုင်ယီထက်ပိုကောင်းတဲ့အရာမရှိပါဘူးဤဟာဝိုင်ယီကျွန်းသည်လူတိုင်းအတွက်ဖြစ်သည်။
မင်း Oahu မှာ ၃ ရက်နဲ့ပိုနေရင်တောင်စုံတွဲတွေအတွက်နာမည်ကြီးဆွဲဆောင်မှုအချို့မှာ Ho`omaluhia ရုက္ခဗေဒဥယျာဉ် (အဓိကအားဖြင့်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ဓာတ်ပုံများအတွက်သုံးသည်)၊ Haleiwa Town၊ Polynesian ယဉ်ကျေးမှုစင်တာ၊ Kualaoa Ranch၊ Ala Moana စင်တာနှင့်ပါLookိ Lookout တို့ပါ ၀ င်သည်။
Oahu မှာလုပ်ဖို့စိတ်ကူးယဉ်စရာတွေအများကြီးရှိတယ်။ ပင်လယ်ကမ်းခြေတွင်စုံတွဲများအနှိပ်ခံခြင်း၊ ဝိုင်သောက်ခြင်း၊ Waikiki သို့အလည်အပတ်သွားခြင်း၊ ကိုယ်ပိုင်ရဟတ်ယာဉ်ဖြင့်ခရီးသွားခြင်း။
ပင်လယ်ကမ်းခြေတွင်ဟာဝိုင်ယီဂီတကိုနားထောင်ခြင်း၊ ကိုယ်ပိုင် cabana ရေကူးကန်ငှားခြင်း၊ ရင်းနှီးသော luau ကိုခံစားခြင်းနှင့်လင်းပိုင်တို့နှင့်ပင်ရေကူးခြင်းတို့ပြုလုပ်ပါ။
ဒီနေရာဟာစိတ်ကူးယဉ်ညစာစားပွဲအတွက်အကောင်းဆုံးနေရာပါ။ Waikiki ရှိ Merriman's အရသာရှိသောအစားအစာများနှင့်ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး Mai Tai ကော့တေးများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည် (spoiler: အဲဒါက lilikoi foam နဲ့ထိပ်ဆုံးမှာပါ။ )
ထို့အပြင် Waikiki ကမ်းခြေ၏ခမ်းနားသောမြင်ကွင်းတစ်ခုရှိသည်။ သို့သော်သင်သည်ဟာဝိုင်ယီပန်းကန်ပေါ်တွင်နေ့လယ်စာစားလိုသည်ဖြစ်စေ၊ ဒေသခံအစားအစာထရပ်ကား နေဝင်ချိန်ကိုကြည့်ရင်းကမ်းခြေမှာစားပါ။
ဘာဆုံးဖြတ်ချက်ဘဲချချ၊ Oahu ကမင်းရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပြီးအချစ်ရေးအပြည့်နဲ့မမေ့နိုင်တဲ့အားလပ်ရက်ကိုဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။
၎င်း၏စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းသောလေထု၊ ဘွိုင်လာ၏ငြိမ်သက်နေသောကန်များနှင့်လှပသောအနုပညာပြခန်းများကြောင့်စိတ်ကူးယဉ်ဆန်သော Capo Cod တံငါရွာကိုရှာရန်ခက်ခဲသည်။
အမှန်မှာ၊ နှစ်မိုင်သာအကျယ်ရှိသော ဦး တည်ရာအတွက်သင်လုပ်လိမ့်မည် စိတ်ကူးယဉ်စရာများစွာလုပ်ရန်ရှာပါ။
ဥပမာအားဖြင့် Wellfleet Bay ၏ Wellvest တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ဘေးမဲ့တောတွင်တောအုပ်များနှင့်ရွှံ့များကိုစီးဆင်းစေသောကမ်းနားတွင်အချစ်ရေးလမ်းလျှောက်ခြင်းကိုသင်ခံစားနိုင်သည်။
သဲသောင်ပြင်များကြားတွင်အပန်းဖြေကမ်းခြေနေ့ကိုခံစားရန် Cahoon Hollow ကမ်းခြေသို့သွားပါ။ Bogename မှဂီတလှုပ်ရှားမှုအချို့ကိုလက်ခံကျင်းပသောနာမည်ကျော် Beachcomber ကိုသင်ပြန်လည်သုံးသပ်နိုင်သည်။
အဆုံးမှာ Wellfleet Didchin ကိုရောက်တဲ့အခါ Nostalgia ကိုခံစားပါ။ ဂန္ထဝင်အချစ်ရေးအတွက်၊ ပုစွန်ဆိပ်ကမ်းကမ်းခြေတွင်နေဝင်ချိန်ပေးနိုင်ရန်ကျောက်ပုစွန်လိပ်နှင့်အချိုရည်ထုပ်များ။
Wellfleet ၌အလွန်ကောင်းသောစားသောက်ဆိုင်များကိုသင်တွေ့လိမ့်မည် လတ်ဆတ်သောငါးဟင်းလျာများကို ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည်နာမည်ကျော်“ Wellfleet ကမာ” အပါအ ၀ င်
ဖြစ်ကောင်း စားဖို့စိတ်ကူးယဉ်ဆန်ဆုံးနေရာတွေထဲကတစ်ခုပါ PB Boulangerie Bistro သည်ပြင်သစ်စားသောက်ဆိုင်အတွင်းခံဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်မင်းမှာစားပွဲမရှိရင်စိတ်မပူပါနဲ့။
နောက်နေ့မနက်မှာအိပ်ရာကိုအရသာခံဖို့ပြီးပြည့်စုံတဲ့ချောကလက် croissants နှစ်ခုကိုသင်ယူနိုင်ပါတယ်။
16. Las Vegas, နီဗားဒါး
Las Vegas သည်အကြောင်းပြချက်များစွာဖြင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌စိတ်ကူးယဉ်မြူနှင်းများတစ်ခုဖြစ်သည်။ မြို့တော်၌ထူးခြားသောဆွဲဆောင်မှုများ၊ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အိပ်မက်ဆန်သည့်နေရာများနှင့်စွန့်စားမှုနှစ်သက်သူများအတွက်လုပ်စရာများစွာရှိသည်။
ထို့အပြင် Las Vegas နွေ ဦး သည်အလွန်ပူ။ မအေးလွန်းပါ။
လူအများသိကြသည့်အတိုင်း Las Vegas သည်ဂိမ်း၊ အရက်နှင့်ပါတီပွဲအတွက်မြို့သည်ကာစီနိုများနှင့်ဝေးဝေးနေလိုသူများအတွက်ဆွဲဆောင်မှုများစွာပေးသည်။
Las Vegas တွင်လုပ်ရမည့်အရာအများစုသည်အစမှစတင်သည်။ Las Vegas Blvd ဟုတရားဝင်လူသိများသောအစွန်းသည်အဓိကလောင်းကစားရုံအားလုံးကိုတွေ့နိုင်သည်။ Strip ၏ထူးခြားသောရှုထောင့်များမှာ Bellagio ၏အရင်းအမြစ်များဖြစ်သည်။
Bellagio ၏အတွေ့အကြုံ အကအရင်းအမြစ်များသည်စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းသည်၎င်း၏ Tuscan ဗိသုကာလက်ရာများနှင့်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောရေကန်တို့သည်စမ်းရေတွင်းများကိုသီချင်းပေါင်းများစွာနှင့်တစ်မူထူးခြားသောလှပသောမြင်ကွင်းဖြင့်သီဆိုဖျော်ဖြေခဲ့သည်။
Las Vegas Strips မှအခြားအထင်ကရနေရာများမှာ New York ရုရှားတောင်၊ Paris ရှိ Eiffel Tower ၌လမ်းလျှောက်ခြင်းနှင့် Circus Circus Circus တို့ဖြစ်သည်။
အစားအသောက်ချစ်သူများအတွက် Las Vegas ဘူဖေးသို့သွားလည်ပါ မဖြစ်မနေလိုအပ်သည်။ အားလုံးနီးပါး ကာစီနိုများကဘူဖေးပေးသည်၊ လူတိုင်းတွင်စားနပ်ရိက္ခာဌာနများစွာရှိသည် ပျော်ရွှင်သော papillae အရသာအမျိုးမျိုးကိုထိန်းသိမ်းရန်မီးဖိုချောင်အမျိုးမျိုး။
၁၇။ မိုဘိုင်း၊ ဘားမား
မင်းနဲ့မင်းရဲ့လက်တွဲဖော်ကအရမ်းကောင်းတယ်၊ လေနဲ့အတူသွားခဲ့တဲ့ Rhett Butler နဲ့ Scarlett or`hara တို့ကိုကစားဖို့အမြဲစိတ်ကူးယဉ်တယ်၊ ဒါကြောင့် Alabama ကစိတ်ကူးယဉ်ကစားရန်အကောင်းဆုံးနေရာတစ်ခုပါ။
မြို့လယ်၌ Dauphin လမ်းနှင့်စိန့်ဖရန်စစ်လမ်းကဲ့သို့အဓိကလမ်းများသည်၎င်းတို့၏သစ်ကိုင်းများမှတွဲလောင်းကျနေသောစပိန်ရေညှိများနှင့်မြင့်သောဝက်သစ်ချပင်များဖြင့်ဖုံးလွှမ်းထားသည်။
ဤနေရာအချို့ကိုယခုအခါအများပြည်သူအားပြတိုက်အဖြစ်ဖွင့်လှစ်ထားသည်။ ဤအရာများသည်ဂရိပြန်လည်နိုးကြားမှုပုံစံဖြင့်တည်ဆောက်ထားသော Oakleigh အိမ်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပြီး၎င်းသည်ကြွယ်ဝသောဝါဂွမ်းအေးဂျင့်တစ် ဦး ဖြစ်သည်။
နူးညံ့သောရာသီဥတုသည်မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းကိုယခုနှစ်၏မည်သည့်အချိန်မဆိုလာရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သော်လည်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌အထူးစွဲမက်ဖွယ်နွေ ဦး အားလပ်ရက်ခရီးတစ်ခုဖြစ်သည်။ UU အများစုသည်ရာသီအစတွင် Azalea လမ်းပွဲတော်ကြောင့်ဖြစ်သည်။
မတ်လဒုတိယနှစ်ဝက်ခန့်တွင်တစ်မြို့လုံးကိုပန်းရောင်နှင့်အဖြူရောင် azalea ပန်းများဖြင့်တန်ဆာဆင်ထားပြီးအထူးအစီအစဉ်များစွာကိုယခုကျင်းပသည်။ စိတ်ကူးယဉ်ညစာစားပွဲအတွက်အဖေဆီသွားပါ။
၎င်းသည်ဘားနှင့်မက္ကဆီကန်စားသောက်ဆိုင်ဖြစ်လျှင်ပင်သူသည်စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသောခြံဝင်းအပြင်ဘက်၌ထိုင်နေစဉ်သူ့ကို Tuscan ကျေးလက်သို့ပို့ဆောင်ခဲ့သည်ကိုသင်ခံစားရပေမည်။
၁၈။ Kona၊ ဟာဝိုင်အီ
ဒါကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့အကောင်းဆုံးရင်ခုန်စရာလည်ပတ်စရာနေရာတွေထဲကတစ်ခုပါ။ Hawaii ဟာစိတ်ကူးယဉ်ပျားရည်ဆမ်းခရီးတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုလူတိုင်းထင်သည်။ Kona၊ HI သည်အမေရိကန်ရှိမည်သည့်စုံတွဲအတွက်မဆိုစုံလင်သောအချစ်ရေးခရီးဖြစ်သည်။
ကမ်းခြေများနှင့်ထူးခြားသောဟာဝိုင်ယီဟင်းလျာကိုနှစ်သက်သောစုံတွဲများအတွက် Kona ဧရိယာတွင်အံ့သြဖွယ်ရာများစွာရှိသည်။
Makalawena ကမ်းခြေ ဟာဝိုင်အီ၏အထင်ရှားဆုံးကမ်းခြေများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်လှပသော (နူးညံ့သော) သဲဖြူကမ်းခြေများရှိသည်၊ ကမ်းခြေတွင်တစ်ရက်အိပ်ရန်အကောင်းဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
Bay တွင်အဏ္ဏဝါသက်ရှိများကိုလေ့လာရန်ဒီရေကူးကန်လည်းရှိသည်။ သင်ကံကောင်းလျှင်ပင်လယ်လိပ်များသည်ရေညှိပင်များကိုမြင်နိုင်သည်။
Papa Kona သည်အချစ်ရေးတနင်္ဂနွေနေ့လည်စာအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ဘွတ်ကင်တင်သောအခါစားပွဲများအလွန်အကန့်အသတ်ရှိသောကြောင့်အခွင့်ထူးခံရေအဆင့်ကိုတောင်းခံပါ။
ဟာဝိုင်ယီနံနက်စာပန်းကန်ပေါ်တွင်သူတို့၏အရူးအကျိအချွဲများ၊ နေလောင်ထားသောကြက်ဥများ၊ အမဲသားပေါင်မုန့်၊ ဟင်းရည်နှင့်ဆန်နှင့်နာမည်တူ Kona ကော်ဖီတို့သည်အရသာရှိသည်။
19. ကလိဗ်လန်, အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်
ဤအရာသည်သင်အနီးရှိ Romantic Getaways တစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်တတ်နိုင်သောအမေရိကန်မြို့တစ်မြို့တွင်မထင်မှတ်ဘဲစိတ်ကူးယဉ်ခရီးတစ်ခုကိုရှာနေလျှင် Ohio၊ Cleveland သို့သွားရန်စဉ်းစားပါ။
ဤမြို့သည်အနောက်အလယ်ပိုင်းလေ ၀ င်လေ ၀ င်လေထွက်မရှိသောရေကန်ဘေးမြို့ဖြစ်သည်။ မင်းရဲ့အချစ်ရေးပုံစံဘဲဖြစ်ဖြစ်၊ လူတိုင်းအတွက်တစ်ခုခုတော့ရှိတယ်။
ယဉ်ကျေးမှုနှင့်သမိုင်းကြောင်းကိုပိုစိတ်ဝင်စားသောသူများအတွက် Cleveland သည်နိုင်ငံ၏အကောင်းဆုံးအခမဲ့အနုပညာပြတိုက်များဖြစ်သည့် Rock and Roll Hall နှင့် Art of Cleveland ပြတိုက်ကဲ့သို့ပြတိုက်များစွာရှိသည်။
Playhouse Square ရှိသမိုင်းဝင်ရုပ်ရှင်ရုံများထဲမှ Broadway ရှိုးကိုလည်းကြည့်နိုင်သည်၊ သို့မဟုတ် Severance Hall ရှိကမ္ဘာကျော် Cleveland သံစုံတီးဝိုင်းကိုကြည့်နိုင်သည်။
သဘာဝနှင့်အပြင်ဘက်တွင်ရှိသည်ဟုယူဆလျှင်သင်၏အမြန်နှုန်းအတွက်ပိုသင့်တော်သည်။ ဤကိစ္စတွင်သင်သည် Elliwater Park သဲသောင်ပြင် (Cleveland ရှိ Erie ရေကန်မြို့ကမ်းခြေ) နှင့် Cleveland ယဉ်ကျေးမှုဥယျာဉ်ကို ဖြတ်၍ ရင်ခုန်စရာလမ်းလျှောက်နိုင်သည်။
Lakewood ပန်းခြံ (သို့) E 9th Street Pier မြို့လယ်ရှိ Solstice Steps မှ Lake Erie အပေါ်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်နေဝင်ချိန်ကိုကြည့်ပါ။
စူးစမ်းလေ့လာမှုအားလုံးသည်သင့်ကိုဆာလောင်စေသောအခါ Cleveland တွင်ရွေးချယ်ရန်စားသောက်ဆိုင်ရာပေါင်းများစွာရှိသည်။
ပို၍ ရင်ခုန်စရာကောင်းသောစားသောက်ဆိုင်အချို့မှာ L`Albatros၊ ခေတ်မီပြင်သစ်အစားအစာများကို ၀ န်ဆောင်မှုပေးသောအဆင့်မြင့် Marina W၊ ပင်လယ်စာဟင်းလျာများနှင့် Lake Erie ကိုအံ့မခန်းမြင်ကွင်းများပါ ၀ င်သည်။
20. စင်စင်နာတီ, အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်
ဤအရာသည်သင်အနီးရှိ Romantic Getaways တစ်ခုဖြစ်သည်။ တက်ကြွသော Cincinnati မြို့သည် Ohio မြစ်တစ်လျှောက်တွင်တည်ရှိပြီးအချစ်ရေးအပန်းဖြေရန်စံပြနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
စင်စင်နာတီ, အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ် OverTheRhine (OTR) ကဲ့သို့သောသမိုင်းဝင်ခရိုင်များသည်လက်မှုအဖျော်ယမကာ၊ ဘီယာဆိုင်များ၊ ခေတ်မီဆိုင်များစသည်တို့ကိုဖန်တီးရန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိပြန်လည်အသက်သွင်းထားသောကြောင့်လူကြိုက်များသောအားလပ်ရက်ခရီးတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည်။
ဧဒင်ဥယျာဉ်တွင်နေဝင်ချိန်ကိုခံစားပါ၊ Smel's Riverside Park ရှိမြစ်တစ်လျှောက်လမ်းလျှောက်ခြင်း၊ သို့မဟုတ် Cincinnati ရှိအထင်ကရဖျော်ဖြေပွဲတစ်ခုတွင်ဖျော်ဖြေပွဲတစ်ခုကြည့်ပါ။
စွန့်စားစွန့်စားစုံတွဲများသည်အနောက်အလယ်ပိုင်းရှိအကြီးဆုံးအပန်းဖြေပန်းခြံ Kings Island တွင်စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုခံစားနိုင်ပြီးအစားအစာများသည် Cincinnati ၏သမိုင်းဝင် Findlay Market သို့ ဦး တည်နိုင်သည်။
Cincinnati ၏ကြွယ်ဝသောဘီယာအစဉ်အလာသည်စုံတွဲများအား Rhinegeist, MadTree နှင့် Taft Ale House ကဲ့သို့ဒေသခံလက်မှုအဖျော်ယမကာစက်ရုံများသို့လည်ပတ်ခွင့်ပြုသည်။ ဘီယာစက်ရုံခရီးစဉ်များနှင့်ဘီယာဘတ်စ်ကားများကိုအတွေ့အကြုံကိုတိုးချဲ့ရန်သုံးနိုင်သည်။
Sotto သည်မြို့၏အချစ်ရဆုံးနေရာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ အရသာရှိသောအီတလီရိုးရာအစားအစာများကိုကျွေးသောလမ်းကဖေးလေးများအောက်တွင်ရှိသည်.
အနီရောင်ကတ္တီပါကန့်လန့်ကာများ၊ သစ်သားစားပွဲများနှင့်သူ၏လက်မှတ်လက်ဖြစ်ခေါက်ဆွဲတို့ဖြင့်ဖုံးလွှမ်းထားသော candlelight အောက်ထပ်သို့ ၀ င်ပါ။
နောက်ထပ်စိတ်ကူးယဉ်စားသောက်ဆိုင်တစ်ခုမှာ Palm Court ရှိ The Orchids ဖြစ်သည်။ AAA Five Diamond Award ဆုရှင်သည် Hilton Holland Plaza တွင်တည်ရှိပြီး Cincinnati တွင်အကောင်းဆုံးစားသောက်မှုအတွေ့အကြုံဖြစ်သည်။
၂၁။ Kauai၊ ဟာဝိုင်အီ
ကမ်းခြေအားလပ်ရက်များတွင်မယုံနိုင်စရာအချစ်ဇာတ်လမ်းအချို့ရှိသည်၊ Kauai သည်ဟာဝိုင်အီတွင်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။
၎င်းသည် Oahu (သို့) Maui ကဲ့သို့အခြားနာမည်ကြီးကျွန်းများကဲ့သို့မစည်ကားပါ၊ ၎င်းသည်သင်အားလုံးကိုနှေးကွေးစေခြင်း၊ အပန်းဖြေခြင်းနှင့်ကျွန်းပေါ်တွင်အတူတကွကောင်းသောအချိန်ကိုခံစားစေနိုင်သည်။
အလည်အပတ်သွားရန်စီစဉ်ပါ Waimea Canyonမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ရှုခင်းကိုခံစားပါ၊ ဟောက်သံ Wailua ရေတံခွန်ဘေးတွင်ရပ်။ မမေ့နိုင်သော Na Pali ကမ်းခြေသို့လှေဖြင့်ခရီးသွားပါ။ နေဝင်ချိန်အပျော်စီးသင်္ဘောဖြစ်လျှင်အပိုအချစ်ရမှတ်များရနိုင်သည်။ နေဝင်ချိန်
ဒါက Sea Glass Beach မှာစိတ်ကူးယဉ်ခရီးတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ စွန့်စားစုံတွဲများအတွက်စွန့်စားစုံတွဲများအတွက်သင်ဆည်မြောင်းဟောင်းများတစ်လျှောက်ရွက်လွှင့်နိုင်သောထူးခြားသည့်တောတွင်းပိုက်လိုင်းခရီးကိုသင်သွားနိုင်သည်။
ပတ်ပတ်လည်၌ရောင်စုံမီးများအောက်တွင်ထိုင်ပါ food truck နှင့်မတူညီသော street foods များကိုနမူနာယူပါမရ။ ဒါက romantic date ပါ။
Poke ကိုမကြိုးစားဘဲဟာဝိုင်အီသို့သွားသောခရီးသည်မပြည့်စုံပါ။ Kealia Poke သည်စိတ်ကြိုက် Poke Bowls ကိုပေးသည်။ မနက်စာစားတဲ့အခါ Anuenue Cafe ရှိ Haupia Mac Nut French Toast ကိုအနိုင်ယူလို့မရဘူး။
မင်းစတိုင်ဘယ်လိုပဲဖြစ်နေပါစေ Kauai ကလူတိုင်းရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပြီးအချစ်ကမ်းခြေအပန်းဖြေခရီးအတွက်ပြီးပြည့်စုံတဲ့နေရာတစ်ခုပါ။ Kauai သည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို့အလွန်ကောင်းသောနှစ်ပတ်လည်ခရီးအတွက်ပြောရန်မလိုပါ။
၂၂။ ဘားဆိပ်ကမ်း၊ မိန်း
မိန်း၏ငြိမ်သက်သောကမ်းခြေတွင်ရင်ခုန်စရာအားလပ်ရက်ကိုရှာဖွေနေသည့်ခရီးသွားများအတွက် Bar Bar သည်သင့်ကိုစိတ်ပျက်စေမည်မဟုတ်ပါ။
Frenchman Bay ၏ပြီးပြည့်စုံသောပုံတွင်တည်ရှိပြီးဤအပန်းဖြေမြို့သည်အလုပ်များသောမြို့အလုပ်များနှင့်ဘ ၀ ကိုလွတ်မြောက်လိုသောပျားရည်ဆမ်းခရီးများအတွက်အကြိုက်ဆုံးဖြစ်သည်။
ပင်လယ်စာစားသောက်ဆိုင်များ၊ လေဟာပြင်များ၊ လက်မှုပစ္စည်းများပြည့်နေသောဆိုင်များနှင့်လေ ၀ င်လေထွက်ကောင်းတို့သည်သူတို့၏ချစ်ရသူများနှင့်ပျော်ရွှင်စရာကောင်းသောအချိန်ကိုခံစားလိုသူများကိုဆွဲဆောင်သည်။
ပင်လယ်နှင့်မြေယာအချစ်ရေးလုပ်ငန်းများများပြားသည်။ Bar Harbor Inn သည်မြို့လယ်လှေဆိပ်ကိုအပေါ်စီးမှကြည့်ရှုနိုင်ပြီးအုပ်စုဖွဲ့အပျော်စီးသင်္ဘောငယ်များစီးဆင်းစေသည်။
Bar Harbor Whale Watch Company သည်သင့်အားအနီးအနားရှိကျွန်းများပေါ်တွင် puffins ကြည့်ရန်အခွင့်အလမ်းများအပါအ ၀ င်တစ်နေ့တာလုံးခရီးစဉ်မျိုးစုံကိုကမ်းလှမ်းသည်။
ကမ်းခြေမှာတစ်ရက်တာပြီးတဲ့နောက်တောထဲခရီးတစ်ခေါက်သွားရတာထက်ပိုပြီးရင်ခုန်စရာကဘာလဲ။ Bar Harbor နှင့်နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေသော Acadia အမျိုးသားဥယျာဉ်တွင်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောတောင်တက်လမ်းအချို့ရှိသည်။
စုံတွဲများသည်တစ်နေ့တာကိုပျော်ပွဲစားထွက်ခြင်း (သို့မဟုတ်) လက်လုပ်ရေခဲမုန့်) ညနေစောင်းတိုင်းလူများစွာပြုလုပ်လေ့ရှိသောအရာဖြစ်သော Agamont Park ရှိမြက်ခင်းပြင်ပေါ်တွင်ဖြစ်သည်။
Stewman's Lobster Pound ကဲ့သို့သောမြို့လယ်ရှိစားသောက်ဆိုင်များစွာတွင်တစ် ဦး ကကျောက်ပုစွန်ညစာကိုရှာပါ။ အချိုရည်တွေကိုလည်း Paddy's Irish Pub မှာဝေမျှနိုင်ပါတယ်။
Bar Harbor သို့အလည်အပတ်သွားခြင်းသည်အလွန်သာယာပြီးမိန်း၏ကမ်းခြေတစ်ခုလုံးကိုစူးစမ်းချင်သည်။ ဤတွင် Maine ကမ်းရိုးတန်းအပန်းဖြေအပန်းဖြေအစီအစဉ်တစ်ခုလုံးဖြစ်သည်။ ပျော်ရွှင်ပါစေ။
23 ။ Denver, Colorado
မင်းအမေရိကရဲ့အကောင်းဆုံးရင်ခုန်စရာအပန်းဖြေခရီးတွေကိုမင်းစဉ်းစားတဲ့အခါ Denver, Colorado ကိုသတိရတဲ့ပထမဆုံးမြို့တော့မဟုတ်ဘူး။ ဘယ်လောက်ရှက်စရာကောင်းသလဲ!
ဘာလို့လဲဆိုတော့ Denver ကအရမ်းကောင်းတယ် သင်ချစ်ခင်ရသူများနှင့်စိတ်ကူးယဉ်ခရီးများသွားမည့်နေရာ.
ဤမြို့သည်အစားအစာ၊ ဖျော်ဖြေရေးစသည်ဖြင့်များစွာရှိပြီး၎င်းအားလုံးသည်စိတ်ကူးယဉ်ဆန်သည်။ Denver ရှိနာမည်ကျော် ၁၆ လမ်းလူသွားလူလာလမ်း၌လက်ချင်းချိတ်။ အမေရိကတွင်ဤအချစ်ခရီးကိုစတင်ပါ။
ဤအရာသည်လည်ပတ်မှုပုံစံကိုထိန်းသိမ်းထားစဉ် Denver ၏အကျော်ကြားဆုံးအထင်ကရနေရာများကိုကြည့်ရှုရန်ဧည့်သည်များအတွက်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
ထို့နောက် Larimer ရင်ပြင်သို့ ဦး တည်။ လမ်း၏မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်မီးများအောက်၌လမ်းလျှောက်ပါ၊ ဤသည် Denver ၏သမိုင်းဝင်ရပ်ကွက် (၎င်းစတင်ခဲ့သောနေရာ) နှင့်စိတ်ကူးယဉ်ညစာစားပွဲများအတွက်စံပြနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ထူးခြားသောရွေးချယ်စရာများတွင်အီတလီ၌ထမင်းစားရသကဲ့သို့ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနှင့်ပြေပြစ်သောအီတလီအယူအဆ Osteria Marco ပါဝင်သည်။ Denver တွင်အကောင်းဆုံးနှင့်လတ်ဆတ်သောပင်လယ်စာအချို့ရနိုင်သော Ocean Prime သို့သွားပါ။
နောက်ဆုံးတော့ The Capital Grille သည်မယုံနိုင်လောက်အောင်ဂန္ထဝင်အရသာရှိသောအကင်ဖြစ်သည်မရ။ နောက်ဆုံးအနေနှင့်အာရုံခံစားဖျော်ဖြေမှုအတွက် The Clocktower Cabaret ရှိအလင်းပြခန်းသို့သွားပါ။
မင်းဟာသတွေ၊ ညဝတ်စားဆင်ယင်မှု၊ ဆပ်ကပ်ဖျော်ဖြေပွဲများနှင့်အခြားစုံတွဲများနှင့်ပျော်ရွှင်စရာညကိုသင်ကစားနိုင်သည်။ ဖျော်ဖြေပွဲအားလုံးကိုရင်းနှီးသော Parisian ပွဲတစ်ခုတွင်ကျင်းပသည်။
သင်ဤဧရိယာကိုပိုမိုခံစားလိုပါသလား။ ထို့နောက်မြို့မှ ၂.၃၀ နာရီမောင်းနှင်ရသော Denver မှ Glenwood Hot Springs သို့တစ်ရက်လေ့လာရေးခရီးထွက်ပါ။
၂၄။ ဆီဒိုးနား၊ အရီဇိုးနား
ထို့ပြင် Sedona ၏ညများသည်သူ၏စခန်းချထားသောအထီးကျန်နေ့ကဲ့သို့ပင်ရင်ခုန်စရာဖြစ်သည်။
Sedona သည်တစ်ခုအပါအ ၀ င်ဖြစ်သည်မှာအံ့သြစရာမဟုတ်ပါ Arizona ၏အချစ်ရဆုံးနေရာများမရ။ အမြင်များသည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိအခြားမည်သည့်နေရာတွင်မှသင်မတွေ့နိုင်ပါ။
စခန်းချခြင်းကိုအစဉ်အလာစိတ်ကူးယဉ်မြူနှင်းများဟုမယူဆဘဲ၎င်းမှဝေး။ အတူတကွရှိနေရန်အထူးအရာရှိသည်။ Sedona သည်ပြင်ပဝါသနာရှင်များအတွက်ပြီးပြည့်စုံသောအချစ်ခရီးဖြစ်သည်။
လေ့လာရေးခရီး၊ ရေကူး၊ ကယပ်လှေ၊ ငါးဖမ်းခြင်းတို့သည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှတက်ကြွသောစုံတွဲများကိုဆွဲဆောင်သည်။
အနီးအနားအနောက်လမ်းဆုံလမ်းမဘေးရှိသီးသန့်ထောင့်၌ပျော်မွေ့ရန်နှစ်သက်သောဝိုင်ပုလင်းဖြင့်ထုပ်ပိုးထားသောအချစ်နှင့်စွန့်စားမှုတို့ကိုပေါင်းစပ်စေသည်။ Grosseria သည်ညတွင်အတူတကွနေပြီးနေ့ခင်းဘက်လမ်းများကိုယူပါ။
၂၅။ Malibu၊ California
Malibu သည်ကယ်လီဖိုးနီယားကမ်းခြေ၌စိတ်ကူးယဉ်မြူနှင်းများအတွက်ပြီးပြည့်စုံသောနေရာဖြစ်သည်။ La County ၏အတွင်း၌ရှိသော်လည်း Malibu သည်လာရောက်လည်ပတ်သူအများစုကိုပထမဆုံးအကြိမ်အံ့အားသင့်စေသောအလွန်သေးငယ်သည့်လေထုတစ်ခုရှိသေးသည်။
ကမ်းခြေများသည်အံ့သြစရာ၊ အထင်ကြီးစရာမဟုတ်ပါ။ Malibu ရှိအရာအားလုံးကိုသဲသောင်ကမ်းခြေများနှင့်အတူထိုင်ခြင်း၊ ရေကူးခြင်းတို့အတွက်စံပြဖြစ်သောစွန့်စားသူအများစုအားတင်နိုင်စေရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
Malibu ရှိနေရာအားလုံး၏အကြိုက်ဆုံးနေရာများစွာသည်ကမ်းခြေ Matador ပြည်နယ်ဖြစ်ပြီးသင်စူးစမ်းနိုင်သောစူးရှသောကျောက်ကမ်းပါးများကြောင့်ဖြစ်သည်။ မြင်ကွင်းများသည်အံ့မခန်းပါ၊ ၎င်းသည်စိတ်ကူးယဉ်နေဝင်ချိန်ကိုခံစားရန်အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်သည်။
ညစာစားရန်ကောင်းသောနေရာသည်ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာနောက်ခံ၏လတ်ဆတ်သောနှင့်ဒေသထွက်အော်ဂဲနစ်နှုန်းထားများဖြစ်သော Malibu Farm ဟုခေါ်သောဆိပ်ခံတံတားပေါ်တွင်တိုက်ရိုက်တည်ရှိသည်။
သင်တောင်တက်ခြင်းကိုနှစ်သက်ပါက Leo Carrillo State Park သည် El Matador ပြည်နယ်၏မြောက်ဘက် ၃ မိုင်အကွာတွင်ရှိပြီးတစ်နှစ်ပတ်လုံးလက်လှမ်းမီနိုင်သောအခက်အခဲအားလုံးကိုလမ်းကြောင်းများပေးသည်။
သငျသညျအပန်းဖြေကမ်းခြေတည်းခိုသို့မဟုတ်ပိုပြီးစွန့်စားခရီးပိတ်ရက်လမ်းလျှောက်ရန်ရှာနေလျှင်, Malibu သည်စုံတွဲတိုင်းအတွက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအားလပ်ရက်တွင်ပြီးပြည့်စုံသောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
၂၆။ Santa Fe, New Mexico
Santa Fe သည်အထူးသဖြင့်သင်ကအပြင်မှာနေချင်။ တက်ကြွသောအနုပညာရှုခင်းရှိလျှင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌အချစ်ရေးယိုစိမ့်မှုများအားသွားရောက်လည်ပတ်ရန်မြို့ကြီးတစ်မြို့ဖြစ်သည်။
ဤရှေးဟောင်းသမိုင်းဝင်မြို့တွင် Worldwned အနုပညာပြခန်းများနှင့်များစွာသောလွတ်လပ်သောပြခန်းများနှင့်ဒေသခံအနုပညာရှင်များနှင့်သမိုင်းကိုအလေးထားသည်။
Santa Fe သည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ရှေးအကျဆုံးမြို့တော်ဖြစ်ပြီးအသေးငယ်ဆုံးမြို့တော်လည်းဖြစ်သည်။
မြို့သည်၎င်း၏အနုပညာကြောင့်လူသိများသည်။ New Mexico Art Museum နှင့် Native Contemporary Arts အနုပညာပြတိုက်တို့ကိုသင်ပြန်လည်သုံးသပ်နိုင်သည်။
Santa Fe Square နှင့် San Miguel Chapel (အမေရိကန်၌ရှေးအကျဆုံးဘုရားကျောင်း ၁၆၁၀ တွင်ပါ ၀ င်သော) ကဲ့သို့သောအခြားဆွဲဆောင်မှုများကိုလည်းသင်လည်ပတ်နိုင်သည်။
Santa Fe တွင်ရွေးချယ်ရန်ကောင်းသောမက္ကဆီကန်အစားအစာစားသောက်ဆိုင်များစွာရှိသည်၊ သို့သော်အထူးညအတွက်သင် Saxon ကိုစမ်းနိုင်သည်။ အပြင်ဘက်ထိုင်ခုံနေရာရှိလှပသောစားသောက်ဆိုင်တွင်သင်ဖယောင်းတိုင်နှင့်အတူစားနိုင်သည်။
စားဖိုမှူးသည်မက္ကဆီကိုစီးတီးမှဖြစ်ပြီးမီးဖိုချောင်အသစ်တစ်ခုကို ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည်။ Santa Fe တွင်တည်းခိုရန်ထူးခြားသောနေရာများစွာရှိသည်၊ domes များမှ tipis သို့လေစီးဆင်းမှုများရှိသည်။
၂၇။ Aspen၊ Colorado
သင်ဟာရင်ခုန်စရာတောင်ပေါ်ကထွက်ပြေးဖို့ရှာနေတယ်ဆိုရင် Aspen ဟာအမေရိကန်ကိုသွားလည်ဖို့အကောင်းဆုံးနေရာတွေထဲကတစ်ခုပါ။ Colorado ၏ Rocky Mountains တွင်တည်ရှိသော Anars ၏ဤလှပသော ဦး တည်ရာသည်ကမ်းလှမ်းရန်များစွာရှိသည်။
ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်မြင်ကွင်းဖြင့်ဤမြို့သည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတောင်တက်လမ်းများ၊ အပေါ်ထပ်စားသောက်ဆိုင်များ၊ ထိပ်တန်းအဆင့်နှင်းလျှောစီးခြင်းနှင့်ပင်လယ်ခေါင်းလောင်းများကြောင့်ကျော်ကြားသည်။
အကယ်၍ မင်းကလမ်းကြောင်းရဲ့ခေါင်းပေါ်ကအညိုရောင်ခေါင်းလောင်းကိုသာအားသန်ရင်၊ ရေကန်ကိုဖြတ်ပြီးလမ်းလျှောက်တာ၊ ဒါမှမဟုတ်မီးတောင်ဝကို ဦး တည်လျှောက်ရင်တောင်မင်းရွာရဲ့မြင်ကွင်းကျယ်ရှုခင်းအချို့ကိုဆုချလိမ့်မယ်။
Alba ကိုကြည့်ခြင်းမှာမင်းရဲ့လက်တွဲဖော်နဲ့ရနိုင်တဲ့မှော်ဆန်ဆုံးအတွေ့အကြုံတွေထဲကတစ်ခုပါ၊ အဲဒါကိုစူပါအချစ်ရေးစုံတွဲတစ်တွဲဖြစ်အောင်လုပ်ပါ။
Aspen သည်သံသရာလမ်းကြောင်းကျယ်ပြန့်သောနေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ မြို့တွင်စက်ဘီးငှားရမ်းမှုများရှိပြီး Aspen နှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ရှုခင်းကိုသက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေရန်နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုပေးသည်။
စျေးဆိုင်အချို့နှင့်စျေးဆိုင်များသို့သွားရန်လမ်းမကြီးတစ်လျှောက်လမ်းလျှောက်ပါ။ Paradise Cafe တွင်ကော်ဖီနှင့်အချိုမုန့်ကို ယူ၍ အရသာရှိသောစားသောက်မှုအတွက် French Alpine bistro သို့သွားပါ။
သင်အချိန်ပေးနိုင်လျှင်၊ Aspen ၏ကျဆုံးခြင်းသည်အထင်ကြီးစရာကောင်းသည်။
ကျောက်တောင်များရှိ Aspen သစ်ပင်များကိုသူတို့၏ရွှေရောင်သစ်ရွက်များဖြင့်အံ့မခန်းမျက်မှန်ကိုတပ်ဆင်ထားသည်၊ ဤအချိန်၌တောင်များသို့လမ်းလျှောက်သွားခြင်းထက်ပိုကောင်းသောအရာမရှိချေ။
28. လက်ပံ, အော်ရီဂွန်
စိတ်ကူးယဉ်မြူနှင်းများအတွက် Portland, Oregon တွင်ဖက်ရှင်နှင့်စျေး ၀ ယ်စျေး ၀ ယ်နယ်မြေများမှသာယာသောစားသောက်ဆိုင်များ၊ အပန်းဖြေစရာလှုပ်ရှားမှုများနှင့်ရင်ခုန်စရာပြင်ပလှုပ်ရှားမှုများအထိအရာအားလုံးရှိသည်။
Mod Fam Global မှအကြံပြုသည် North Avenue North Mississippi မှ North Portland သို့လမ်းလျှောက်ရန်စတင်အကြံပြုသည်။
Lloyd ခရိုင်နှင့် Eliot ၏ Willamette မြစ်ကို ဖြတ်၍ Mississippi Ave. သည် Prostback ကဲ့သို့ protost၊ People Pig (GoAdiggererestaurant) Mesen Ice Cream Thai နှင့် ပတ္တမြားစားကောင်းလက်ဝတ်ရတနာထက်တောင်
macrame၊ staghorn နှင့်တပ်ဆင်မှုတပ်ဆင်ခြင်းသို့မဟုတ်ပလက်ဖောင်း ၁၀၁ ရှိပျော်စရာကောင်းသောဓာတ်ခွဲခန်းအတွက် Pistilis Nurfery ၌ချိန်းဆိုပါ။
တေးဂီတသည်သင်သာဆိုပါက Misssippi မှတ်တမ်းများကို Oldschool ဓာတ်ပြားအရောင်းဆိုင်နှင့်ဒေါ်လာ ၄ ဒေါ်လာဖြင့်ရောင်းချသောဖြန့်ဖြူးသူအတွက်ဖြန့်ဖြူးသည်။
Portland၊ Mt. Cap နှင့် Willamette မြစ်ကို ၃၆၀ ဒီဂရီမြင်ကွင်းဖြင့်ရင်ခုန်စရာလမ်းလျှောက်ရန်တောင်ပေါ်သို့သွားပါ။ တာပန။
မိုင်ပေါင်းများစွာရှည်သောတောလမ်းများတွင်သစ်သားအင်တုံများပါ ၀ င်သည်၊ အချို့နေရာများထက်ရှုခင်းများကိုခံစားရန်စက်ဝိုင်းများပါ ၀ င်သည်။
Willamette မှတဆင့်သင်သည် Voodoo ဒိုးနပ်ကဲ့သို့သောအချစ်ရဆုံးနေရာများ၊ သံပုရာသီး၏ငြိမ်သက်မှု၊ caramel ကွတ်ကီးများနှင့်ကန့်သတ်ဒိုးနတ်နှင့် Graham အနည်းငယ်တို့ကိုသတ်မှတ်သည်။
Portland မှသင်၏အချစ်ခရီးကိုမြစ်အပျော်စီးခြင်း (သို့) LAN ဥယျာဉ်များမှတဆင့်လမ်းလျှောက်ခြင်း၊ အခြားအထင်ကရ Portland မှတ်တိုင်တစ်ခု၊ Powell Books နှင့်လမ်းလျှောက်ခြင်းအကွာအဝေးတွင်အဆုံးသတ်ပါ။
၂၉။ Solvang၊ ကယ်လီဖိုးနီယား
Solvang, California သည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ထူးခြားသောအချစ်ရေးပေါက်ကြားမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
'America Di Little Denmark' ဟုလူသိများသောကယ်လီဖိုးနီယားရှိဒိန်းမတ်လူမျိုးတို့သည်သူတို့၏မြေအောက်ခန်းများ၊ လေရဟတ်များနှင့်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရှုခင်းများကြောင့်၎င်းကိုစိတ်ကူးယဉ်သီတင်းကျွတ်ပိတ်ရက်အတွက်စံပြနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
Santa Barbara ၏ခရိုင်တွင်တည်ရှိပြီး Solvang သည်စိတ်ကူးယဉ်ခရီးတစ်ခုကိုရှာဖွေနေသောစုံတွဲအားလုံးအတွက်အမျိုးအစားတစ်ခုစီရှိသည်။
များစွာသောကိတ်မုန့်များထဲမှပြီးပြည့်စုံသောဒိန်းမတ်အချိုမုန့်ဆိုင်ကိုရှာဖွေရန် Solvang ၏အလယ်ဗဟိုကိုလမ်းလျှောက်ပါ၊ မတူညီသောသံလွင်ပင်များ၌မတူညီသောသံလွင်ဆီများမြည်းစမ်းပါ၊ ခြေလျင်ခရီးသွားပါ၊ Gaviota State Park ၌အချစ်ရေးနှင့်ဝှက်ထားသောနွေးထွေးမှုကိုရှာဖွေပါ၊ သို့မဟုတ်ချစ်စရာဝိုင်မြေအောက်ခန်းများကိုစူးစမ်းပါ။ နှင့်အရသာများ Solvang, Santa Ynez နှင့် Los Olivos ရှိအခန်းများ
Landsby Hotel တွင် Mad & Vin သည်ဝိုင်များနှင့်အရသာရှိသောပင်လယ်စာများကြွယ်ဝစွာပါ ၀ င်သည်၊ Mirabelle Inn ၏ First & Oak ၏လတ်ဆတ်သောဒေသခံအစားအစာများသည်သူငယ်ချင်းများနှင့်မျှဝေရန်စုံလင်သောဟင်းလျာလေးများအဖြစ်တည်ခင်းဧည့်ခံသည်။
Solvang၊ ကယ်လီဖိုးနီယားသည်ဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးမြို့၌အလှအပ၊ အရသာနှင့်သက်တောင့်သက်သာပေါင်းစပ်ထားသောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ Solvang သည်စုံတွဲများအတွက်အားလပ်ရက်အကောင်းဆုံး site တစ်ခုဖြစ်သည်။
၃၀။ Glenwood Springs, Colorado
Glenwood Springs (Glenwood Springs) သည်ရင်ခုန်စရာကော်လိုရာဒိုတောင်ပေါ်အပန်းဖြေစခန်းများသို့ရောက်လာသောအခါအခြေအနေအားလုံးပြည့်စုံရမည်။ ဤ alpine ဦး တည်ရာတွင်လှပသောသဘာဝရှုခင်းများ၊ ရေပူစမ်းများနှင့် ဝိုင်နှင့်အစားအစာကောင်းကောင်းစားရန်နေရာများစွာရှိသည်.
Iron Mountain Hot Springs နှင့် Glenwood Hot Springs တို့သည်မြို့တွင်အကျော်ကြားဆုံးသဘာဝရေပူစမ်းနှစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့အားလုံးသည် spa နှင့် site စားသောက်ဆိုင်ကဲ့သို့အဆင်ပြေလွယ်ကူသောအဆောက်အအုံမျိုးစုံကိုပေးသည်။
Tieshan ရေပူစမ်းတွင်ရေကူးကန် ၁၆ ခုရှိသည်။ Glenwood Hot Springs သည်နာမည်ကောင်းရသော်လည်းကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးဆုံးသဘာဝအပူကန်ဖြစ်သည်။
ဤ ၂ မိုင်ခရီးသည်လှပသော turquoise ရေကန်သို့ ဦး တည်သွားပြီး Colorado သို့သင်၏လမ်းခရီးတွင်သင်အကြိုက်ဆုံးမှတ်တိုင်တစ်ခုဖြစ်လာလိမ့်မည်။ စိတ်ကူးယဉ်ပျော်ပွဲစားတစ်ခုအတွက်ပျော်ပွဲစားပွဲနှင့်တောက်ပသောရှန်ပိန်အချို့ယူလာပါ။
Rifle Falls State Park သည် Glenwood Springs အပြင်ဘက်တွင်တည်ရှိသည်။ ၎င်းတွင်နိုင်ငံအတွင်းအထင်ရှားဆုံးရေတံခွန်များထဲမှတစ်ခုရှိသည်။ ပျော်မွေ့ရန်လမ်းလျှောက်ခြင်းနှင့်လျှောက်သောလမ်းများစွာရှိသည်။
အသားစားသားကဲ့သို့အတွေ့အကြုံမျိုးခံစားလိုပါက Glenwood Adventure Park သို့သွားပါ။ roller coaster စီးရန်နှင့် marshmallows ကိုခံစားရန်တစ်ရက်ယူပါ။ သို့သော်အချစ်ရဆုံးအရာသည် Ferris wheel ကိုသင်ချစ်ခင်သူနှင့်အတူစီးရန်ဖြစ်သည်။
မင်းဒီ Romantic Getaways အနီးကမင်းဒီဆောင်းပါးကိုကြိုက်တယ်၊ အဲဒါကမင်းအတွက်တော်တော်အထောက်အကူဖြစ်မယ်လို့ငါတို့မျှော်လင့်တယ်။
သင့်အနီးတွင်နောက်ထပ် Romantic Getaways အကြောင်းမေးခွန်းများနှင့်အကြံပြုချက်များရှိပါက ကျေးဇူးပြု၍ ကျေးဇူးပြု၍ ဤဆောင်းပါးကိုသင်၏သူငယ်ချင်းများနှင့်မျှဝေပါ။
Tags:USA တွင်စျေးသက်သာသော romantic getaways, ဘတ်ဂျက်ဖြင့်စုံတွဲများအတွက်အကောင်းဆုံးအားလပ်ရက်နေရာများ, ၂၀၂၁ စုံတွဲများအတွက်အကောင်းဆုံးသီတင်းကျွတ်ပိတ်ရက်, စုံတွဲများအတွက်ပျော်ရွှင်စရာသီတင်းကျွတ်ပိတ်ရက်များ, ယူအက်စ်အေတွင်အပန်းဖြေစုံတွဲများ, အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌အချစ်ကမ်းခြေအပန်းဖြေခရီးများ, စုံတွဲများအတွက်အချစ်ရေးခရီး, နှစ်ယောက်သားအတွက်အားလပ်ရက်
အရီဇိုးနားတွင်စားရန်အကောင်းဆုံးနှင့်အေးချမ်းသောအရာများ ၁၀ ခု
2020 ခုနှစ်တွင်ဖလော်ရီဒါသို့ပြောင်းရွှေ့? ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၏အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များ
ဖလော်ရီဒါပထမအကြိမ်အိမ်ဝယ်သူအစီအစဉ်များ 2021 နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်
ဗစ်တိုးရီးယား Akpan TMLT
Victoria Akpan သည်နိုင်ဂျီးရီးယား၊ Uyo၊ Uyo၊ Uyo တက္ကသိုလ်မှဆက်သွယ်ရေးအနုပညာဘွဲ့ရရှိထားသည်။ သူမသည်အလွတ်တန်းဖန်တီးမှုနှင့် blog အကြောင်းအရာဖန်တီးသူဖြစ်သည်။
အချိန်တိုင်းအကောင်းဆုံး Rap အယ်လ်ဘမ်များနှင့်အကောင်းဆုံး Kanye West အယ်လ်ဘမ် ၁၃ ခု